“Bale waa ka wanaagsan yahay Zidane, Figo iyo Ronaldo” – Savage – Gool FM
“Bale waa ka wanaagsan yahay Zidane, Figo iyo Ronaldo” – Savage
(Madrid) 16 Abril 2020. Ciyaaryahankii hore ee qaranka Wales, Robbie Savage ayaa Gareth Bale ku tilmaamay ciyaaryahan la qariyay wax qabadkiisa, sidoo kalena uu yahay xiddiga ugu sheeg-sheegidda yar.
Savage waxa uu tiir uu cuskado uga dhigay dooddiisa in Bale uu koobab iyo goolal ka badan kuwa Zinedine Zidane, Ronaldo iyo Luis Figo uu gacan galiyay Real Madrid.
30-jirka mar noqday saxiixa ugu qaalisan Los Blancos ayaa xagaagii 2013 kaga soo biiray kooxda Tottenham Hotspur.
Bale ayaa si wacan ku bilawday waayihiisa Santiago Bernanbeu isagoo goolal muhiim u dhaliyay kuna hoggaamiyay koobab magaciisa lagu xasuusan doono, balse dhaawacyo kala duwan ayaa usoo jiiday dhaliilo ku qotoma qaab ciyaareedkiisa.
Sidaas darteed, Savage ayaa qaba inay caddaalad darro tahay in hoos loo dhigo xiddig u dhaliyay Real Madrid wax ka badan 100 gool wali la eedeynayo.
Ku guuleysiga afar koob oo Champions League ah, horyaalka La Liga iyo saddex jeer oo koobka kooxaha dunida ah ayaa sidoo kale soo jeedisay dareenka xiddiggii hore ee qaranka Wales iyo kooxo badan oo Ingiriis ah, waxaana uu hoosta xarriiqay in xushmaddii uu mudnaa Bale aanan la siinin.
Madal su’aalo iyo jawaabo ah oo bartiisa Twitter-ka kula wadaagay taageerayaasha ku xiran ayuu kaga jawaabay su’aal ahayd ciyaaryahanka ugu badan ee la xushmad dilay 20-kii sano ee lasoo dhaafay.
“Waxaan dhihi lahaa Gareth Bale oo Real Madrid ka waayay” ayuu Savage jawaab ka dhigay jawaabtiisii.
“Waxa uu dhammaan tartamada u dhaliyay 105 gool, 13 koob ayuu la qaaday, saddex gool ayuu ka dhilayay fiinaallada Champions League oo uu ku jiro qaalmo-rogadkii uu ka dhaliyay Liverpool, sidoo kale gool-ku-laadyadana shabaqa wuu galiyay.
“La barbar-dhig Zinedine Zidane-ka weynaa, 49 gool ayuu u dhaliyay, lix koob ayuu kula guuleystay – gooshii caanka noqotay ee uu ka dhaliyay Bayern Leverkusen waa goosha kaliya uu ka dhaliyay fiinaalka Champions League – balse waxay noqotay mid caalami ah.
“Luis Figo waxa uu u dhaliyay 56 gool, toddobo koobna wuu la qaaday, kaddiba Ronaldo 104 gool ayuu u dhaliyay, saddex koob ayaana u raacsan.
“Sidaas darteed, Gareth Bale waa ka goolal iyo koobab badan yahay mid kasta oo saddexdooda ka mid ah.
“Aniga ahaan, Bale waa ciyaaryahanka loogu xaqiri ogyahay kooxdiisa iyo taageerayaashiisa 20-kii sano ee ugu dambeysay.” ayuu dooddiisa kusoo xiray Robbie Savage.
Neymar Aabbihii oo daaha ka rogay shaqsiga lahaa go'aanka uu laacibka reer Brazil kaga tagay Barcelona
“Way fiicnaan laheyd in markale la arko seddexda weerar dabka ah ee Barcelona” – Mascherano